UKhuzani uzobonakala eHostela eziqeshini ezintsha zalo mdlalo
ABALINGISI bomdlalo eHostela ngoLwesibili abaqophe isiqephu esizokhombisa maduzane nomculi kamaskandi uKhuzani, noveze ukuthi kumjabulisile ukuba yingxenye yalo mdlalo
NOKUBONGWA PHENYANE | March 13, 2019
SESINGENE ekulingiseni isilomo sikamaskandi, uKhuzani Mpungose, maduzane ozobonakala emdlalweni othokozelwa abaningi kuleli, eHostela.
Isolezwe lithole ngomthombo walo ukuthi uKhuzani ngomunye wabalingisi abafakiwe eziqeshini ezintsha zomdlalo.
“Okwamanje uyena kuphela osakhona kwabasha, angazi noma kusazoba khona abanye njengoba ukuqopha kuzophela ekupheleni kwesonto,” kusho umthombo.
Ethintwa uKhuzani uvumile ukuthi uqophile nalo mdlalo izolo futhi lokhu kusho lukhulu kuye. “Ngibonga kuMjosty ngento ayenzile njengoba kunguyena obone ukuthi le ndawo ngingayilingisa kahle. Ngiyacela ukuthi abantu babukele lo mdlalo njengoba indawo yami izodonsa amehlo kakhulu.”
Uthe ngesikhathi eqopha akubanga nzima njengoba abalingisi balo mdlalo bememukele ngezandla ezimhlophe okwenze umsebenzi wakhe waba lula. “Lokhu kungikhombise ukuthi angiyena nje umaskanda kuphela kodwa nali elinye ikhono lami eselimbulekile nesengifuna liqhubeke. UMjosty ngeke ngimkhohlwe ngempela njengoba ekhombise ukungabi nomona wangifaka entweni enkulu kangaka.”
UKhuzani kulo mdlalo uzobe engalingisi ndawo yamuntu okuchaza ukuthi uzobe enguyena. UKhuzani unxuse abantu ukuthi babukele lo mdlalo ngoba ubafihlele induku emqubeni. Uzobonakala esiqeshini esizobonakala ngeSonto elizayo ngoMashi 24 kuMzansi Magic (161).
Kwenzeka lokhu nje wonke amehlo abheke emcimbini i-#Gcwalisa iMabhida ekupheleni kwenyanga nokungumcimbi osungulwe uKhuzani ohlelwa iDlamlenze Development Foundation.
Lo mcimbi uzoba seMoses Mabhida ngoMashi 30.